खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ? « Pahilo News
खानेपानी नै छैन, के ले हात धुने ?
प्रकाशित मिति :3April, 2020 12:55 pm
पटक पटक हात धुन पानी कसरी जुटाउने अहिले यस क्षेत्रका स्थानीवासीको चिन्ताको विषय बनेको छ । ती दुई नगरपालिकाले चोक चोकमा हातधुने व्यवस्था मिलाइका छन् । हाल राजधानीमा सबैभन्दा बढी खानेपानी आपूर्ति गर्ने वाग्मतीको मुहान पनि यही भेगमा पर्छ । सोलुखुम्बुबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ मा घर बनाइ बस्नुभएका ग्याल्जेन शेर्पा धारामा खानेपानी पाइन्छ भन्ने सुनेकै कारण आफू यहाँ बस्न आएको तर पानी पाउन नसकिएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
वाग्मतीको मुहान वाग्द्वारसमेत रहेको नगरपालिकाका अधिकांश वडामा खानेपानी लिन बिहानै पुराना धारा खोज्दै हिँड्नुपर्छ । बिहान पाँच बजे नै पुग्दा पनि पुराना धारामा लाम लागिसकेको हुन्छ । खानेपानी थाप्न कम्तीमा एकघण्टा लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । पानी थाप्ने भीडका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्ला भन्ने चिन्ताले पानी थाप्न जानेलाई सताउने गरेको छ ।
पानी भरेर घरमा राख्दा लामखुट्टेका कारण डेङ्गुको खतरा बढ्न सक्ने भएकोले सताउने गरेको उपभोक्ता राधिका भण्डारीले बताउनुभयो । गर्मी बढेसँगै डेङ्गुका बिरामी बढ्ने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वर नगरापालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे मुहान क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराएर मात्र तल्लो भेगमा लैजान काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताउनुहुन्छ ।
“दिनमा पाँचदेखि सात वटासम्म गुनासा त धारामा पानी आएन भन्ने नगरवासीका आउने गरेको छ, मैले दुईपटक लिमिटेडको महाङ्कालचौर शाखाका प्रमुखलाई पानी दिनु भनी फोन गरेर भनिसके अझै मुहान क्षेत्रमै पानीको वितरण सहज हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
मेलम्चीको पानी उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ । तर गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका अधिकांश भागमा खानेपानीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने पहल भएको छैन । गोकर्णेश्वरका नगरप्रमुख चालिसे नगर क्षेत्रबाट जाने पानी यहीँका जनताका धारामा पानीको व्यवस्था नभई तलतिर वितरण गरिए मूल पाइपबाट वाग्मतीमा पानी बगाउन बाध्य हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सो माग लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पटकपटक दिइएको उहाँले सुनाउनुभयो । स्थानीय सरकारको मागलाई गम्भीर रुपमा नलिएपछि समस्या आउने भएकाले बेलैमा ध्यान दिन नगरवासीको अनुरोध छ । कागेश्वरीका नगरप्रमुख कृष्णहरि थापा पनि माथिल्लो भागमा पानी वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशनालयलगायत सरोकार भएका निकायलाई पटकपटक अनुरोध गरिएको बताउनुहुन्छ ।
दुवै नगरपालिकाको आग्रहलाई निर्देशनालयलगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारीले सुनेका छैनन् । लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक मिलनकुमार शाक्य सुक्खा मौसम भएकाले मुहान क्षेत्रमै पानी दिन नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ । हाल उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । तर लिमिटेडले भने दैनिक आठ करोड लिटर मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ । वर्षाद्मा भने लिमिटेडले दैनिक १५ करोड लिटरसम्म पानी वितरण गर्ने गरेको छ ।
“मुहान क्षेत्रमा पानी पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, अहिले नसकेपनि मेलम्चीको पानी त्यहाँ वितरणका लागि सञ्जाल बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल म निर्देशनालयमा हुँदा पनि भएको हो, त्यस क्षेत्रमा पानी नदिए पुराना मूल पाइपबाट उपभोक्ताले सिधै पानी लगेजस्तो मेलम्चीका ठूला पाइपमा पनि आउनसक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ, जनताले पाइप हेर्ने तर खानेपानी नपाउने हुनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
तर बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेझैँ मुहान क्षेत्रमा पानी वितरणका लागि कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको यस क्षेत्रका उपभोक्ताको गुनासो छ । हाल उपत्यकामा प्रशोधन हुने पानीमध्ये धेरै भने सुन्दरीजलबाट वाग्मती स्रोतकै पानी आउने गरेको महाप्रबन्धक शाक्यले जानकारी गराउनुभयो । सुन्दरीजलबाट वर्षाद्मा एकदेखि दुई करोड लिटर पानी उत्पादन हुन्छ । सुक्खा मौसममा भने मुस्किलले २० लाख लिटर पानीमात्र सुन्दरीजलबाट प्रशोधन हुने गरेको छ ।
धारामा पानी नआएका कारण हात धुन पाइएन भनी आफूलाई दिनमा धेरै फोन आउन थालेपछि फोन नउठाइ बस्न बाध्य हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । ट्याङ्कर शाखालाई भने त्यसको जानकारी दिई पानी पठाउन लगाउने गरेको पनि शाक्यले बताउनुभयो । पानी नआने उपत्यकाका धेरै ठाउँमा पाँच हजार लिटरसम्मका ट्याङ्की राखिएको छ । सुक्खा मौसममा यी ट्याङ्कीमा पानी ट्याङ्करबाट हाली लिमिटेडले सेवा दिने गरेको छ ।